Harrison aisa zvimwe zvezviitiko zvisingakanganwike pamumbure munyika. Panzvimbo pe elevator pitch, vanopinda vanokurudzirwa kugovana zvinovaita zvinotyisa mumasekondi makumi matatu. Kunyangwe izvo zvingangonzwika kunge hokey, zvinoisa vanoenda ipapo, uye vanofanirwa kuchera pakadzika pakupa chirevo chavo pachinhu chavanodada nacho, kana kuva nehanya nacho, kana izvo zvavanoshuvira kuve. Panzvimbo pe pitch, iko kupenya kwechinguva muchikamu chemunhu chemunhu akamira kana kugara ipapo pakati pevasingazive.
Pane zviitiko zvandakapinda, handina kufamba ndichiedza kurangarira kuti bhizinesi kadhi rakanga riri raani. Ini ndaiziva hunhu pamunhu wega wega hwaisakanganwika. Semuenzaniso, ndakasangana naDavid Roux. David aive muridzi wengoma aifarira kutamba kuChechi kwake Svondo yega yega. Kunze kwaizvozvo zvikuru hunhu, David aive hupenyu murairidzi kune vechidiki. Hazvina kutora nguva refu ndabva ndahaya David kudzidzisa wangu wega mwanasikana.
chipfuro - Kazhinji yenguva haisi iyo yekuenda kunetiweiti iwe yauchazoita bhizinesi nayo, munhu ari mune yavo network iyo yako meseji inoendeswa kune Via neshoko-remuromo.
Dai iwe waiziva kuti munhu ari mhiri kwako aive neinoshamisa network yevanotarisira vatengi iwe vaunogona kubatsira, waizotaura sei navo zvakasiyana? Iwe haungavaise zvachose, handiti? Handidi. Hezvino izvo zvandaizotarisa pane:
Zvikuru - kuita hurukuro nemunhu ari mhiri kwangu uye nekuona kuti ndinogovana navo chinhu chisingakanganwike navo chavasingazokanganwe. Kwandiri, zvinogona kudaro kuti ndiri US Navy Veteran kana baba vamwe vaviri. Kune vakawanda vevashambadzi mumaguta ese… asi kwete zvakawandisa zvaive Desert Shield uye Desert Storm Veterans vaishandira mungarava yeTank Landing Ship uye vakarera vana vaviri vasinganzwike vari vega!
chivimbo - Ini ndoda kudzidza kuti ndiani munhu ari mhiri kwandiri ari maviri akabatana uye a anovimbika chipangamazano of. Kana munhu wandakamira akatarisana naye aine chinoshamisa network yevatengi kana vadyidzani vavari kuraira kuti ndiye akakwana mutengi kwandiri, ini ndoda kuisa yakawanda nguva yakawanda kuita navo uye kudzidza maitiro atingave ekukosha kune mumwe mumwe.
Iwo akanakisa networkers andinoshanda nawo vanoziva chakavanzika icho vazhinji vasingaite. Chinangwa chavo havasi ivo vanhu vari pachiitiko chekubatanidza ... ndivo vanhu vane vanhu varipo mukati zvavo yakawedzera network. Pamwe urikuenda kuchiitiko pamwe nevamwe makumi mashanu varipo. Yako tarisiro haisi munzvimbo iyoyo, ndiwo zviuru zvematarisiro mukati meimwe-muromo-yekubatana kunze kwenzvimbo iyoyo!